Dhibta iyo halista xilliyada roobka ka curtaan geyigeenna. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 26, 2017	0 311 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Tilmaamaha laga bixiyo aragtida dhiiqada iyo wasaqda xilliyada roobku curto waxay u muuqdaan inaysan kala fogeyn. Dadka oo la qabsaday iyo maalmaha yar ee dhiiqada iyo uskaga ka dhasha oo in yar kaddib ku idlaada oogada dusheeda ayaa ka dhigtay in mowduuca dhiiqada iyo wasaqda xilliyada roobka aan aad loo faaqidin.
Previous: Sida loogu aflaxay Mashruucii Ol’olaha Horumarinta Reer Miyiga.
Next: Askari toogtay gabar uu jeclaa oo diiday inuu guursado.
Haweeney mataano ku dhashay da’da 64-jirka
Hindiya: Haweenka umula oo loo kordhinayo waqti nasiineedka gunneysan
Haweeney Masjidkii ay ku riyoon jirtay ka dhistay Las Vegas.